Akwụkwọ - Akwụkwọ Akụkọ | Akwụkwọ Akwụkwọ (Peeji nke 5)
Garcilaso de la Vega, nnukwu onye na-ede uri na Spanish Renaissance, nwụrụ n'ụbọchị dịka taa na 1536 na Nice. N’ime ncheta ya, ọ napụtara 5 sonnets ya.
On the ncheta nke ọmụmụ Carlos Arniches m na-echeta ya ọgụgụ pụta ìhè ụfọdụ nke ya ma ama sainetes na-arụ ọrụ na ụfọdụ iberibe.
TECUENTO bụ ngwa n'efu maka ụmụaka na ndị okenye iji dezie akụkọ n'asụsụ ogbi nke Spanish n'ụzọ dị mfe ma dịkwa ụtọ.
"The Epic nke Gilgamesh". Otu uri abuo site na 2.500 BC. Incredibly dị ugbu a.
Oge mbu mụ na Epic nke Gilgamesh gbara m gbara iri-abuo. Agụrụ m ya na nkwanye enyi, ọkachasị mbipụta nke Akụkọ nke Eze nke Ndị Eze. "Mepee ya, bulie mkpuchi ya. Wepụ mbadamba lapis lazuli n'ime ya. Gụọ ka Gilgamesh si taa ahụhụ niile wee merie ihe niile."
Taa, m na Javier Alonso García-Pozuelo, onye edemede nke La cajita de snuff, onye na-ede akwụkwọ akụkọ nyocha nke onye nyocha Jose María Benítez na-ekwu okwu.
Nhọrọ nke blọọgụ nyocha akwụkwọ edemede 10 ebe ị ga-ahụ ezigbo ndụmọdụ iji gụọ. Ebe ị ga-ahụ akụkọ ị nwere mmasị na ya.
Ọtụtụ mmadụ maara Stephen King dị ka onye isi egwu, ma ọ bụ aha aha ọ bụla ọzọ na-emetụta ụdị akụkọ ndị a. Mana obughi ihe niile otutu ndi mmadu mara Stephen King dika “onye isi ujo”, mana ole na ole mara akuko edemede banyere mmekorita na mmekorita akwukwo ya.
"Ọ ga-abụrịrị onye na-eme achịcha," otu onye edemede gwara m ọtụtụ afọ gara aga. Ruo taa, m ka na-aghọta okwu ndị ahụ. Anyị niile, gịnị kpatara anyị ji ede ihe? Ajuju nke ndi ode akwukwo juworo onwe ha. Naanị ihe doro anya bụ na ụzọ onye dere ya edoghị anya.
James Fenimore Cooper nwụrụ na Septemba 14, 1851, mana amụrụ ya na Septemba 15, 62 afọ tupu mgbe ahụ. Taa, m na-enyocha ndụ ya na ọrụ ya na ncheta ya.
Taa, m ga-atụle isiokwu n'agbanyeghị na ọ dị mkpa na nka niile, na akwụkwọ ọgụgụ karịa n'ihi njirimara ya: Ana m ekwu maka ndị mmegide. Taa, anyị ga-atụle isiokwu n'agbanyeghị, ọ bụ ezie na nka nile, na akwukwo karie ihe ndi ozo: mmegide na mmekorita di na etiti.
N'ime ọrụ niile, nke onye edemede nwere ike ịbụ otu akụkọ ifo jikọtara ya. Imirikiti n'ime ha abụghị ndị ọhụụ, mana ma eleghị anya, ọrụ nke onye edemede bụ otu n'ime akụkọ ifo. Ka anyị lee ụfọdụ metụtara na nka nke ide akwụkwọ akụkọ.
Terje Vigen, amaokwu a na-amaghị ama nke Henrik Ibsen dere
Terje Vigen bụ uri dị egwu nke Henrik Ibsen bipụtara na 1882. Ndị ọha na eze amaghị, ọ bụ kpochapụwo na mba Nordic.
Taa m na-eme ncheta ncheta nke Johann Wolfgang von Goethe, nna nke German Romanticism, na-akọwapụta 4 nke abụ ya na 20 nke ahịrịokwu ya.
Phoenix nke igwe igwe, Lope de Vega ebighi ebi. 5 sonnet
Ọ bụ ụbọchị ncheta ọhụụ nke Lope de Vega, Fénix de los Ingenios. M na-ahọrọ 5 sonnets maka ncheta gị.
Mika Waltari na Sinuhé onye Ijipt. Nyochaa ọrụ nke onye edemede Finnish.
Mika Waltari nwụrụ na Helsinki na August 26, 1979. N'ịbụ onye a ma ama maka akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, aha ya kachasị ama bụ Sinuhé, onye Ijipt.
Achọpụtara amaokwu ọhụrụ iri na atọ maka Ulysses na Odyssey ya, nke Homer dere.
Achọpụtala amaokwu iri na atọ nke Homer's Odyssey na Olympia. M na-enyocha ọrụ nke a kpochapụwo nke Greek akwụkwọ.
Gburugburu ụwa na ndị edemede 10
Site na Japan rue Colombia, njem a gburugburu ụwa na ndị edemede 10 na-ekpughe ụfọdụ ndị edemede kachasị emetụta akụkọ ihe mere eme.
Taa, m na-enyocha otu n'ime usoro ojii kacha atọ m ụtọ nke m gụrụ, nke Myron Bolitar na enyi ya na-adọrọ adọrọ Win Lockwood, nke Harlan Coben dere.
Ndị edemede a bụ ndị a ghọtara mgbe ha nwụsịrị na-akwado ọnọdụ dị iche iche nke ndị edemede na-enwetụbeghị ụdị ọrụ ha.
Neo-naturalism na Uru nke Ndụ na Obodo, nke Pilar Fraile, nzọ nzọ kachasị ọhụrụ nke ụlọ obibi akwụkwọ Caballo de Troya.
Herbert George Wells nwụrụ na Ọgọst 13, 1946. Ana m echeta onye Bekee a ma ama na-ede akwụkwọ akụkọ sayensị, onye bu ụzọ n'ụdị ahụ.
Ndị a na-akọ akụkọ kacha mma n’akụkọ ihe mere eme mere ka akwụkwọ ọgụgụ dị mkpirikpi bụrụ akara maka ndị na-agụ akwụkwọ na ndị edemede ọhụrụ.
María José Moreno (Córdoba, 1958), onye edemede, isi mgbaka na onye edemede nke Trilogy of Evil, nke ga-agbapụ n'oge na-adịghị anya n'ụdị usoro telivishọn.
Rabindranath Tagore. Afọ 77 na-enweghị ndị ama ama nke India.
Taa bụ ụbọchị ncheta afọ iri asaa na asaa nke ọnwụ Rabindranath Tagore, onye ama ama nke ndị India na-ede uri. M na-atụle akụkụ ya na ụfọdụ amaokwu ya.
Ndị edemede America kachasị mma
Ernest Hemingway ma ọ bụ Emily Dickinson bụ ụfọdụ n'ime ndị edemede America kachasị mma nke ọrụ ya bụ akụkụ nke akụkọ ntolite.
Percy Bysshe Shelley. 6 obere poems maka ụbọchị ọmụmụ ya.
Ọ bụ ụbọchị ncheta ọhụụ nke ọmụmụ Percy Bysshe Shelley, otu n’ime ntụnye aka nke akwụkwọ akwụkwọ ịhụnanya ndị bekee. Lee abụ abụ ya kacha mma.
Onye America na-ede akwụkwọ Herman Melville nwere ụbọchị ọmụmụ ya taa. Onye edemede nke Moby Dick na-adịghị anwụ anwụ, na ebe nchekwa ya nwere ahịrịokwu 20 sitere na ọrụ ya ndị ama ama.
Taa, anyị na-eme emume ncheta afọ 200 nke Emily Brontë, onye bekee n’ide akwụkwọ n’ide n’edemede, onye edemede nke Wuthering Heights. Icheta ya bu ndi abu ife ndia.
Taa nnukwu ndị ode akwụkwọ anọ na-ekesa ụbọchị ọmụmụ ha. Ha bụ George Bernard Shaw, Aldous Huxley Antonio Machado na Ana María Matute.
Robert Burns bụ onye ama ama ama ama na Scotland, ihe atụ nke mmekọrịta ịhụnanya Scottish. O ruola narị afọ abụọ na iri abụọ na abụọ kemgbe ọ hapụrụ anyị.
Onye edemede edemede Ernest Hemingway gbara afọ iri itoolu na iteghete nke ọmụmụ nke ọtụtụ akwụkwọ ụwa. Ndị a bụ ụfọdụ akụkụ nke ọrụ ya.
Ọ bụ ncheta ọhụụ nke ọmụmụ AJ Cronin, onye dọkịta na onye edemede nke Scottish, onye edemede nke nnukwu ụlọ ma ọ bụ Ihe omimi nke obere akpa ojii.
Sir Tim O'Theo nke RAF. Omuma nke Bruguera alaghachila n'ihi na ...
Bruguera alaghachila, akwụkwọ akụkọ a na-akọ akụkọ egwuregwu na-ekele Penguin Ramdon House. A ga - enwe mkpokọta nke The Best nke Sir Tim O'Theo na agwa ndị ọzọ.
John Malkovich dị ka Poirot. Na ihu ndị ọzọ sitere na onye nchọpụta Agatha Christie.
Ana m enyocha ọtụtụ ihu Poirot nwere, àgwà mara mma na ezi uche nke Agatha Christie, onye ihu ya ikpeazụ bụ nke John Malkovich.
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị ga-adị ndụ ọnwa abụọ? Ajụjụ ọnụ nke Santiago Díaz, onye edemede nke Talión
Ajụjụ ọnụ nke Santiago Díaz Cortés, onye edemede nke Talión: Onye protagonist ahụ kpebiri iji ọnwa abụọ gara aga tinye iwu Talión.
Ndị edemede onwe ha III: ajụjụ 10 maka Jorge Moreno si Madrid
Taa, m na-ewetara onye edemede ọzọ na-enweghị akwụkwọ ọ bụla kwesịrị ịdebe. Jorge Moreno, si Madrid, zara ajụjụ 10, karịsịa ntakịrị.
JK Rowling: Ihe atụ nke imeri
Onye nkuzi mere ka ndụ jọọ njọ nye Joanne Rowling, Oriakụ Morgan, bụ otu n’ime ajọ agwa kachasị na Harry Potter: Prọfesọ Severus Snape.
Herman Hesse. Afọ 141 nke onye edemede dị mkpa. Fọdụ nkebi ahịrịokwu
Herman Hesse bụ onye edemede, onye na-ede uri, onye edemede na onye na-ese ihe, ọ ghọrọ otu n'ime ndị edemede kachasị mkpa na ndị gụrụ ebe niile na narị afọ nke XNUMX. Nyochaa nke ọrụ ya.
Na June 22, 1865, Duke nke Rivas nwụrụ. Ọrụ ya kachasị anọchite anya ya bụ Don Álvaro ma ọ bụ ike akara aka, nke m na-ahọrọ mpekere ole na ole.
Onye edemede nke Sonarás bajo las Aguas, akwụkwọ ọgụgụ aghụghọ nke onye nyocha Petunia Prado del Bosque, nke edere n'ụsọ Oké Osimiri Cantabrian.
N'oge ọkọchị gara aga, tweet, n'ụdị akụkọ a na-enyo enyo nke Manuel Bartual kere, malitere ịrịa ma gosipụta mmalite nke edemede akwụkwọ.
Ndi dere akwukwo ndi ruteghi Nobel Prize for Literature kwadoro na, oge ufodu, ulo akwukwo ndi Sweden nwekwara ike mehie.
William Butler Yeats bụ otu n'ime ndị na-ede uri kacha ukwuu na Ireland ma taa bụ ụbọchị ọmụmụ ya. E nwere 6 nke ya poems usọrọ ya.
Alexander Pushkin. Afọ ncheta nke ọmụmụ ya. 7 poems
Alexander Pushkin bụ onye a maara nke ọma na onye nwere mmasị na Russia, mana ọ bụkwa onye edemede na onye na-ede egwuregwu. Ahọrọ m 7 poems ka emee maka ọmụmụ ya.
Akwụkwọ kacha mma anwansi
Ikike ijikọ anwansi na ndụ kwa ụbọchị na-eme akwụkwọ ndị a kachasị mma anwansi kachasị mma ndị nnọchianya kachasị mma nke ụdị a na Latin America.
June 5, 1898. A mụrụ onye na-ede uri Spanish a kacha agụ n’oge niile, Federico García Lorca. Otu afọ ọzọ ọ na-eme ncheta ọmụmụ ya na 5 nke sonnets ya.
Akwụkwọ ndị a kachasị mma nke Chimamanda Ngozi Adichie na-ekpuchi isiokwu ndị dị oke mkpa dịka nwanyị, mbata na mbata ma ọ bụ njirimara Africa.
Ajụjụ ọnụ nke Luis Roso, onye okike nke Inspektọ Trevejo.
Taa, m na-agwa onye edemede Extremaduran bụ Luis Roso, onye zara ajụjụ ụfọdụ. Kwuo maka akwukwo ha, ndi dere ha, na ihe ha dere.
Akwụkwọ kacha mma etinyere n'oké osimiri
N'iji ohere nke oge ọkọchị na-eru nso, akwụkwọ ndị a kachasị mma n'akụkụ oké osimiri bụ njem na-enye ume ọhụrụ site na ụfọdụ nnukwu ọrụ akwụkwọ.
Akwụkwọ kacha mma Salman Rushdie
N'etiti akwụkwọ ndị kachasị mma site n'aka Salman Rushdie anyị na-ahụ ọ bụghị naanị ụfọdụ n'ime akụkọ kacha mma nke India, mana nyocha zuru oke nke mba dị ka ọgba aghara dịka ọ na-adọrọ mmasị.
Dashiell Hammett gbara afọ 124. Site na egbe, igodo, ihe ubi na ihe ndị ọzọ.
Dashiell Hammett gbara afọ 124. Echere nna nke mpụ akwụkwọ, m na-echeta ụfọdụ n'ime ya kasị ama ọrụ na nkebi ahịrịokwu.
Taa bụ ụbọchị ncheta afọ 159 nke amụrụ Arthur Conan Doyle, onye edemede okike nke Sherlock Holmes. M na-eme ememme ncheta ncheta ya na ụfọdụ akụkụ nke ọrụ ya.
Isiokwu mbụ raara nye ndị edemede nwere onwe ha. Francisco Hergueta, onye edemede nke La Solana, malitere, ọ zara ajụjụ 10 banyere ahụmịhe ya.
María Frisa ga-abụ ihe nbipụta nke oge a site na akwụkwọ akụkọ ya Lekọta m. Ọ zara ajụjụ ndị a 10 gbasara ọrụ ya.
Fall of Usher House bụ otu n'ime ọrụ Edgar Allan Poe kacha mara amara. Isiokwu a bụ akụkụ nke edemede kọleji.
Taa Camilo José Cela ga-abụrịrị 102 afọ. A na m echeta ya na ahota okwu na amaokwu si na La familia de Pascual Duarte.
Xabier Gutiérrez, San Sebastián, 1960, onye okike nke noron gastronomic, nke ụdị noir na-ewere ọnọdụ n'etiti stovu na mbinye aka nri. Xabier bụ otu n'ime ndị isi ama ama na mba anyị na onye edemede nke tetralogy Los Aromas del Crimen, na-egosipụta onye isi ọrụ nke Ertzaintza, Vicente Parra.
Literature, ekwe ekwe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi.
Art adịghị adị na ebumnuche nke ịbụ "ihe ziri ezi", n'ihi na anyị nwere ihu abụọ mmekọrịta anyị na ụbọchị kwa ụbọchị, mana iji bulie ma mma na egwu nke ọnọdụ mmadụ. Literature na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ziri ezi dị ka mmanụ na mmiri.
Akwụkwọ kacha mma nke akwụkwọ Cuban
Anwansi a mụrụ n'ihi na ọ dị mkpa ihu eziokwu nke mba a na-asọ oyi dị ka ọ na-enwe nchekwube na-agbakwunye ụfọdụ n'ime akwụkwọ kacha mma nke akwụkwọ Cuban.
Akwụkwọ kacha mma na-abụghị akụkọ ifo
Akwụkwọ ndị a kachasị mma na akwụkwọ akụkọ sitere na Zarathustra's manifesto ruo Virginia Woolf's feminist ọhụụ site n'ụzọ ndị ọzọ nke ịghọta oge ụfọdụ na akụkọ ntolite.
Akwụkwọ abụ kacha mma
Neruda ma ọ bụ Dickinson bụ ụfọdụ n'ime ndị odee agụnyere na nhọrọ a nke akwụkwọ abụ kacha mma n'akụkọ ihe mere eme nke ejiri okwu oge na-adịghị agafe agafe.
Gha n'echeghị eche n'echiche, n'etiti East na West, akwụkwọ ndị a kacha mma site n'aka Haruki Murakami na-anọchite anya ọdịdị nke onye ode akwụkwọ Japan kachasị ewu ewu n'ụwa.
Site na La Celestina na Javier Cercas fanpic, anyị na-agafe oge dị iche iche nke egwu anyị site na akwụkwọ kacha mma Spanish na-esote n'akụkọ ihe mere eme.
Agba nke India ma ọ bụ ememme San Fermín na-agwakọta na ndepụta ndị a nke akwụkwọ kacha mma nke Hemingway, Steinbeck ma ọ bụ Kerouac ga-eme.
Ihe ndekọ ndị a kachasị mma nke ndị edemede na Instagram na-enye anyị ohere ịleba anya na mbara igwe nke akwụkwọ ozi na akụkọ ụfọdụ nke ụfọdụ ndị edemede kachasị mma.
Nkịta siri ike Adịghị agba egwu bụ akwụkwọ ọhụrụ nke Arturo Pérez-Reverte dere. A doggy akụkọ starring El Negro, onye bụbu ọgụ ọgụ.
Akwụkwọ ọgụgụ njem: Akwụkwọ ezumike ọhụụ.
Njem nleta agụmagụ na-ewu ewu. Ihe a na-enye iji weghachite ntọala nke akwụkwọ akụkọ kachasị amasị gị na-eto eto. Site na ntọala obodo nke telivishọn saga nke Game nke n'ocheeze na ụzọ gasị London na nzọụkwụ nke Sherlock Holmes.
Akwụkwọ kacha mma nke nwanyị
Akwụkwọ ndị nwanyị kachasị mma na akụkọ ntolite na-eduga anyị inyocha na ịnweta nhụjuanya niile nke mgbanwe pink site na edemede na akwụkwọ akụkọ dị iche iche.
Akwụkwọ Asia kachasị mma
Akwụkwọ ndị Asia kachasị mma na akụkọ ntolite na-akpali obi ụtọ na ihe omimi nke mba dịka Japan, India, China ma ọ bụ Cambodia.
Russell Crowe. Ndi edemede 3 ya kachasi mkpa.
Onye na-eme ihe nkiri Russell Crowe bụ agụụ m maka ịme ihe nkiri agụụ mmekọahụ ọ gbarịtara afọ 54 taa Iji mee ememe, ana m enyocha ndị edemede edemede ya kachasị mkpa.
Algernon Charles Swinburne, onye a bụrụ abụ na Victorian
Algernon Charles Swinburne bụ onye England na-ede uri n'oge Victoria. Ana m enyocha ọrụ ya na-ese okwu ma cheta ụfọdụ amaokwu ya.
Norse chi na akụkọ ifo
Akwụkwọ ndị a kacha mma nke akụkọ ifo na chi Norse na-emikpu anyị na mbara igwe na akụkọ mgbe ochie nke ndị dike ji egbe, ụmụ agbọghọ oyi na-atụ n'anya na hama na-adịghị anwụ anwụ.
Edmond Rostand. France na-eme emume ncheta afọ 150 nke ọmụmụ ya.
France ekwuola 2018 afọ nke ncheta mba maka Edmond Rostand ma na-eme ememme ncheta afọ ya n'obodo ya.
N'ikwekọ na mbipụta na Spain nke The Witch, anyị na-agagharị na akụkọ nke akwụkwọ Swedish nke ndị akwụkwọ kacha mma Camilla Läckberg na-anwụghị.
Taa, n’etiti afọ 2018, mmadụ enweghị ike imeghe akwụkwọ akụkọ na-anataghị ozi anọ site na WathsApp na ọkwa isii sitere na Twitter. Ka anyị leba anya na nsogbu nke ịgụ na ụwa ọdịyo.
Machị 58 site n’aka Jo Nesbø. Iberibe akwụkwọ akụkọ ya na akwụkwọ ọhụụ n'April
Onye isi akwukwo banyere omempụ nke Norway nwere 58 March taa. Na 29th ọ hụrụ ìhè mbụ ya, nke gbara ọchịchịrị n'ezie, na Oslo. Iji mee ememe, m na-ahọrọ mkpokọta nkebi ahịrịokwu sitere na akwụkwọ akụkọ nke onye kachasị ewu ewu, onye na-elekọta Harry Hole.
Anyị nọ n’etiti afọ jubilii nke Teresian 2017-2018 nke bidoro n’Ọktọba 15 nke afọ gara aga. Ya mere, m na-enyocha 5 nke abụ ndị ahụ onye nsọ nke Avila, Teresa de Jesús, onye a mụrụ n'ụbọchị a na 1515, hapụrụ anyị.
Onye edemede Scottish bụ Philip Kerr nwụrụ anwụ ụnyaahụ Fraide 23 n'ihi ọrịa kansa. Ọ dị nnọọ mwute na akụkọ a na-atụghị anya ya maka ndị niile hụrụ ụdị oji na n'ezie maka ọtụtụ puku ndị na-agụ ya. Bernie Gunther bụ ụmụ mgbei.
Friday nke ihe mgbu. Ọ dịghị ihe dị mma karịa Lola kachasị ama ama na akwụkwọ iji soro taa na ihe niile ha bụ. Oru okwu site na kpochapụwo site Vladimir Nabokov.
Taa bụ ụbọchị Maachị 21, na-eme mmemme Pobọchị Abụ Powa. M na-ahọrọ poems 6 site na Quevedo, Garcilaso, Gutierre de Cetina, Kipling na Burns, nke bụ ọkacha mmasị m, iji mee ụbọchị dị mkpa dị otú ahụ.
Oruola afọ asatọ kemgbe ọnwụ Miguel Delibes, otu onye edemede ama ama n’edemede anyị. M na-azọpụta maka ncheta gị mkpirisi ahịrị okwu na mpekere nke ụfọdụ n'ime ọrụ ya kachasị mkpa.
Roberto Martínez Guzmán, onye edemede nke usoro ojii nke Eva Santiago mere maka «Maka m, onye ọ bụla na-agụ akwụkwọ na-ahọrọ otu n'ime akwụkwọ m bụ ihe ùgwù, n'ihi na ọ na-arara oge ya ma tụkwasị m obi. Ọ bụ n'aka m ka m chọrọ ikwugharị. Convinkwenye ya bụ ihe ịma aka. "
Mkparịta ụka Nkata bụ ihe a na-eme n'etiti puku afọ iri. N'ile anya na ndị na-ege ntị n'etiti afọ 15 na 25 bụ ndị gụrụ n'asụsụ Spanish, Leemur nwere nbudata 30.000 na izu mbụ nke mmalite ya na Google Play.
Ajụjụ ọnụ nke Esteban Navarro: onye edemede akwụkwọ na mpụ na ndị uwe ojii.
Esteban Navarro bụ Murcian site na amụrụ na site na Huesca site na nnabata, onye uwe ojii mba na onye edemede, onye edemede di iche-iche na onye nwere mmasi banyere ụdị ojii, prọfesọ na Canarian School of Literary Creation, Onye Okike nke ndị uwe ojii na omenaala, Onye Mmekọ nke Aragón Negro Ememme na onye mmekorita nke ọtụtụ akwụkwọ akụkọ.
N'isiokwu anyị taa, anyị na-eche karịa ndị niile na - agụ akwụkwọ anyị na - ede akwụkwọ ma na - enye ụfọdụ ndụmọdụ iji họrọ ezigbo aha maka ndị edemede gị.
N'isiokwu anyị taa, anyị na-ewetara gị ụfọdụ ederede ederede ka ị mara ha ma ọ bụrụ na ịnweghị ihe akaebe banyere ha.
Afọ 34 Na-enweghị Cortázar: Ihe Odide Ya kacha mma
Taa, anyị bịara ịtụle ụbọchị dị mkpa mere ụnyaahụ, Febụwarị 12: 34 afọ na-enweghị Cortázar: Akwụkwọ ya kacha mma.
Alberto Conejero na-ede njedebe nke ọrụ Lorca agwụchabeghị
Na edemede nke taa anyị na-agwa gị na onye edemede Alberto Conejero na-ede njedebe ngwụcha ọrụ Lorca. Ọ ga-premiere na Madrid.
Ememe Akwụkwọ 7 dị n'etiti ejiji, oriri, ịhụnanya na mpụ
Anyị nọ na Carnival. Ekike, oriri, ịkwa iko, ihe ọchị na ịgụ akwụkwọ. Anyị lere akwụkwọ 7 ndị a anya ebe carnivals bụ protagonists n'ọtụtụ ụzọ.
Hogarth Shakespeare Project. Nnukwu ndị edemede na-ekpuchi ọrụ Shakespeare
The Hogarth Shakespeare oru malitere na 2014 na ebumnuche nke idegharị akwụkwọ bard Bekee maka ndị na-ege ntị na narị afọ nke 400. Ọ bụ akụkụ nke emume maka afọ 2016 nke ọnwụ ya na XNUMX. Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ndị edemede na-ekpuchi ọrụ ya.
Charles Dickens. Daybọchị ọmụmụ nke narị afọ nke XNUMX nke akwụkwọ akụkọ Bekee
Charles Dickens, onye England na-ede akwụkwọ ọgụgụ, dị afọ 206. N’icheta ncheta ya na oke na oru ya di nkpa, echetere m ufodu okwu okwu n’olu ya.
Onye edemede America bụ James Ellroy abụwo onye mmeri nke Pepe Carvalho Nrite na Barcelona Black Novel Festival. Taa, m na-agwa akụkọ ịhụnanya m na Mad Dog nke LA
You maara banyere ịdị adị nke agụmakwụkwọ maka okike edemede? Nkatọ ụdị ọrụ a nke anaghị akwalite ezigbo akwụkwọ.
N'isiokwu a anyị na-ewebata gị ngwa ọhụrụ maka akwụkwọ na akwụkwọ ọdịyo: Do ​​maara ngwa akwụkwọ Bookchoice? Lee, anyị na-ekwu maka ya.
N'isiokwu anyị taa, anyị ewetara gị 5 ndị ​​edemede ukwu mere akụkọ ihe mere eme: Gloria Fuertes, Virginia Woolf, Rosalía de Castro, Jane Austen na María de Zayas.
Abali abuo nke onwa abuo na abuo bu emume ncheta nke iri asaa na ise (2th of the end of the Battle of Stalingrad), oge nke diri agha nke abuo. M na-eleba anya n’isi ụfọdụ banyere agha ahụ a ma ama n’obodo Rọshịa n’obodo Volga.
Ajụjụ ọnụ nke Víctor del Arbol, Nadal Award 2016.
Víctor del Árbol na-eme ka akwụkwọ akụkọ mpụ ihe karịrị ụdị. Akụkọ ha ọ bụla dị iche, ọ na-amalite n’isi, ọ nweghị ihe nwere ike ịkọ. Ọ dịghị nke ọ bụla na akwụkwọ akụkọ ya akwadebe na-agụ nke ọzọ.
Akwụkwọ ozi 117 sitere na Lope de Vega nke National Library nwetara
You ma na Ọbá akwụkwọ Mba ahụ zụtara Euro 400.000 maka mkpokọta akwụkwọ ozi 117 sitere na Lope de Vega degaara Duke nke Sessa?
Vicente Blasco Ibáñez na-eme ncheta ọmụmụ ya. Fọdụ ahịrịokwu sitere na ọrụ ya
Don Vicente Blasco Ibáñez na-eme ncheta ọmụmụ ya taa. Amụrụ ya na Jenụwarị 29, 1867 na Valencia. Usọrọ m chịkọta ụfọdụ nkebi ahịrịokwu si ya kasị nnọchiteanya ọrụ.
Abụọ February. Onye mbido Cole na Millás dị nsọ
A na-ere akwụkwọ akụkọ abụọ a na etiti ọnwa Febụwarị. Otu site n'aka onye mbido nke Britain bụ Daniel Cole na nke ọzọ site n'aka onye anyị doro nsọ bụ́ Juan José Millás. Ha bụ ọganihu abụọ nke m nweela ike ịgụ na ịkwado.
Ohi akwukwo na egbu mmadu. Anyị na-adị ndụ n'ihi na anyị tụkwasịrị obi. Ndị mmadụ dị n'ihi na enwere ntụkwasị obi: ụbọchị ọ bụla anyị na-etinye ndụ anyị na ndụ ndị anyị hụrụ n'anya karịa n'aka ọtụtụ ndị, ọtụtụ n'ime anyị anyị amaghị.
Site na obodo Macondo rue poems nke nwa Chile, akwukwo ndi a kachasi nma nke Latin Latin bu ihe ndi kachasi nma nke sitere na nke ozo nke Atlantic.
Ntughari ohuru nke Barcelona Black Novel Festival, BCNegra 2018, na-abịa, nke ga-amalite site na Jenụwarị 29 ruo February 4. Anyị na-enyocha isiokwu gị, mmemme gị, onyinye gị na aha ndị ama ama ga-eleta gị.
Ursula K. Le Guin nwụrụ na 88
Taa, anyị ewetara gị akụkọ ọjọọ maka ụwa akwụkwọ, na ọ bụ Ursula K. Le Guin agabigawo n'afọ 88.
Akwụkwọ ndị ị tụfuru, ndị ọzọ na-emegharị
Taa, anyị ewetara gị otu n'ime akụkọ ndị masịrị gị nke ukwuu. Nke a bụ ezigbo ụzọ ụzọ mkpofu ahihia dị na Ankara, Turkey.
Naanị afọ 25, onye Canada na-ede uri nke India bụ Rupi Kaur abụrụla eze nwanyị nke ndị a na-akpọ "instapoets" site na amaokwu ụfọdụ na-abanye n'oké nsogbu nke oge anyị.
Nchịkwa, ịlụ karịa otu nwanyị ma ọ bụ agha bụ ụfọdụ isiokwu na-akọwapụta kọntinenti kasịnụ n'ụwa na nhọrọ nke akwụkwọ kacha mma nke akwụkwọ ndị Africa.
Murakami, Vargas Llosa ma ọ bụ Bolaño bụ ụfọdụ n'ime aha na ndepụta ndị na-esonụ nke akwụkwọ a ga-ebipụta na 2018 ma anyị enweghị ike ichere ịgụ.
N'isiokwu anyị taa, anyị chọrọ ịkwanyere George Orwell, onye ode akwụkwọ nwere obi ike ikwu maka nrụrụ aka zuru ụwa ọnụ nke oge ahụ.
N’ụbọchị a n’afọ 1788, George Gordon Byron, onye a na-akpọ mgbe ebighi ebi dịka Lord Byron, bịara n’ụwa. Anyị na-eme emume ncheta ọmụmụ ya site n’ide abụ ya anọ.
Nhọrọ anyị nke akwụkwọ kacha mma nke narị afọ nke XNUMX gụnyere ihe niile site na ogologo njem nwa nwoke na-acha odo odo ruo na obodo ndị Colombia na-abụghị akụkọ ifo
Nkatọ, ụmụ nwanyị, anwansi n'ezie ... Akwụkwọ kacha mma nke Isabel Allende nyere anyị ohere ịbanye na mbara igwe nke onye edemede Hispanic dịkarịsịrị ọgụgụ n'ụwa.
Obi dị anyị ụtọ ịnweta Gabriel Martínez na blọọgụ anyị taa, tinyere akwụkwọ akụkọ itoolu bipụtara, ha niile nọ na Amazon, otu n’ime ha, El Asesino de la Vía Láctea, ahịa Amazon kachasị elu na La Estirpe del Cóndor, 2014 Azorín Award Finalist.
Site na nwa agbọghọ nke soro White Rabbit ruo n'echiche efu nke Tolkien, akwụkwọ ndị kachasị ere ahịa n'akụkọ ihe mere eme ka bụ ndị mgbe ochie.
O ruola iri afọ abụọ na iteghete kemgbe ọmụmụ Edgar Allan Poe, yabụ ugbu a ọ bụ oge iji kelee ya na mgbe ebighi ebi ya dị ka nnukwu n'etiti oke akwụkwọ, akụkọ, uri na, karịa ihe niile, oke ụjọ, egwu agụụ na mmetụta kachasị emetụta. Taa bụ ụfọdụ n'ime ahịrịokwu ya.
N'isiokwu anyị taa, anyị na-enyocha nnukwu ọrụ: Nchịkọta nkenke nke akwụkwọ "El camino" nke Miguel Delibes, Nadal Prize na 1947.
María Goodin nyere anyị ụgha gị kachasị mma na 2013. N'ime nke a, ọ bụ naanị akwụkwọ akụkọ, o wepụrụ obi ya na ahụmịhe ya dịka onye ọrụ afọ ofufo na ebe a na-arịa ọrịa ọgụgụ isi.
Onye England na-ede akwụkwọ bụ Simon Beckett dere tetralogy ojii a n'okwu banyere onye nyocha banyere ọdịnala mmadụ bụ David Hunter n'afọ iri mbụ nke narị afọ a. Anyị na-ele anya.
Uzo abuo nke edere maka Jose María Guelbenzu: Akwukwo akwukwo ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na akwukwo ndi ozo di na Mariana de Marco. Hà dị nnọọ iche?
N'akwụkwọ edemede taa anyị na-ewetara akwụkwọ akụkọ edere akwụkwọ: "Ọnwụ abụghị ihe na-ewute gị nke ukwuu", akwụkwọ mbụ nke Inés Plana dere.
Ndị a dị mkpirikpi akụkọ 16 a ma ama (ma ọ bụghị nke a ma ama) bụ njem site na mbipụta akwụkwọ kachasị obere (na nke dị ala). You chọrọ ịmụta otu esi eme akụkọ micro? Soro ndụmọdụ anyị.
Kingsbọchị Ndị Eze. Agụụ na onyinye. Na protagonists nke ọtụtụ puku akwụkwọ. Taa ka m gosipụta mmadụ asatọ ndị a. Black, epic na kpochapụwo.
Mkpụrụedemede nke Mpụ na-enweghị Z mgbe ọnwụ nke onye edemede ya, Sue Grafton, onye okike nke akwụkwọ akụkọ mpụ nke Kinsey Milhone gosipụtara.
Ọ bụ na Jenụwarị 1, 1818 mgbe _Frankenstein ma ọ bụ Prometheus nke oge a bipụtara, ọrụ ahụ buliri onye edemede ya, bụ British Mary Shelley elu. Anyị gaghachigharịrị akwụkwọ kachasị mma dị na akwụkwọ.
Taa, anyị ewetara gị otu edemede enyere maka ọrụ bụ isi nke Julio Cortázar, "Rayuela". Ọ bụ akwụkwọ dị iche na ndị ọzọ niile ... Anyị na - edozikwa obi abụọ a na - enwekarị banyere ọrụ a: Kedu ụdị ya? Onye bu protagonist? Na onye anwansi? Banye ma hapụ obi abụọ.
Amaokwu si na Instagram, Premio Planeta kachasị ọhụrụ ma ọ bụ akwụkwọ ọhụrụ nke Almudena Grandes so n'ime akwụkwọ kachasị mma nke 2017 ị gaghị echefu.
2017 na-agwụ ma m na-atụle ngwaahịa nke ụfọdụ noir akwụkwọ akụkọ merie m afọ a. N'elu ndepụta ahụ bụ Vikings, ndị Italitali na Gauls, yana Yankees na Spaniards.
Akwụkwọ 10 ndị a kachasị mma site n'aka Gabriel García Márquez na-eme ka eluigwe na ụwa nwee echiche anwansi pụrụ iche, nke na-adịghị agafe agafe na nke jupụtara n'oké akụkọ.
Ị maara…? Christmas na akwụkwọ ...
N’edemede anyị taa, n’abalị Ekeresimesi, anyị ewetara ụnụ ịmata ọgụgụ edemede nke na-eme na Iceland. You maara gbasara ọdịnala a?
Onweghi ekeresimesi na-enweghi Charles Dickens. Onwere ihe onyonyo ohuru banyere onu ogugu nke onye edemede bekee na otu o siri cheputa akuko ekeresimesi ya.
Nyochaa nke 6 nke akwụkwọ akụkọ izizi na akwụkwọ mpụ mpụ na mba na nke e gosipụtara na Jenụwarị 2018. Fitzek, Fernández Díaz, Castillo ...
Taa, anyị ewetara gị ndepụta nke akwụkwọ a kacha agụ na 2017 na Spain, Mexico, Argentina na Colombia. Bụ akwụkwọ ọkacha mmasị gị nke afọ na ndepụta a?
Oge oyi na-abịa, oge kachasị mma nke afọ maka m na otu nke kachasị mma ịgụ. Ana m enyocha akwụkwọ 8 ndị a dị ka onye na-akwado aha ha.
Hitler, Franco, Gandhi, Disney ... Ha niile maara akụkọ banyere Ferdinand Bull, mana ha niile meghachiri n'ụzọ dị iche. Know maara ya?
N'ime akwụkwọ ndị a iji nye na ekeresimesi anyị na-ahụ site na mkpu mgbochi mmekpa ahụ ruo onye mmeri ikpeazụ nke Nrite Nobel na Literature.
N'isiokwu a, m na-aga site na onye edemede ruo onye edemede iji gbaa ndị ọrụ ibe anyị ume ma mee ụfọdụ ndụmọdụ dị mkpa ka ederede ha wee hụ ìhè.
Anyị tụlere akwụkwọ asaa nke akwụkwọ agụmakwụkwọ ma ọ bụ ndị raara nye asụsụ, akụkọ ihe mere eme ya ma ọ bụ mmasi ya nwere aha dịka Lázaro Carreter ma ọ bụ Vilches.
Kirk Douglas, akụkọ akụkọ Hollywood kachasị ewu ewu, agbanweela afọ 101. Nyochaa akwụkwọ ya dị ka onye edemede na ihe odide ederede ya.
Taa, anyị na-ekwu maka ndị edemede, ọkachasị anyị mere ka ị mara onye nwanyị edemede edepụtara n'afọ amụrụ gị. You maara ha niile?
Taa ụbọchị mmiri dị n'etiti anyị na-abịa na edemede na-akọwapụta Oscar Wilde, William Shakespeare, Leon Tolstoi, ... Ndị ode akwụkwọ niile, na-enweghị mgbagha.
Anyị na-enyocha ọrụ Leopoldo Alas «Clarín»: La Regenta
Taa, na akwụkwọ akwụkwọ anyị anyị na-abanye na ọrụ nke Leopoldo Alas "Clarín": La Regenta. You guo akwukwo a?
Afọ na-agwụ ma a na-ebupụta akwụkwọ ọgụgụ ọhụụ kachasị ọhụrụ na ọnwa a nke nhazi akwụkwọ. Ana m enyocha 5 nke aha ndị ahụ na-apụta ugbu a.
N’edemede akwụkwọ nke taa, anyị tụlere Benito Pérez Galdós, onye nnọchi anya kachasị elu nke Spanish Realism. Echi anyị ga-ekwu maka Leopoldo Alas "Clarín".
Robert Louis Stevenson. Afọ ncheta ọnwụ ya. Akwụkwọ ya na-adịghị anwụ anwụ
Robert L. Stevenson bụ otu onye edemede kachasị ewu ewu na akwụkwọ niile. Afọ 123 agafeela kemgbe ọ nwụrụ. Anyị na-enyocha ọrụ ya.
Ndị edemede a mụrụ na Disemba. Fọdụ n'ime okwu ya kwa ụbọchị
Anyị na-enyocha ụfọdụ ndị edemede a mụrụ na Disemba wee họrọ ahịrịokwu ụfọdụ sitere na ọrụ ha na ndụ ha iji soro ọnwa ikpeazụ nke afọ.
Christie Agatha. Mmegharị ihe nkiri ya a ma ama
Emeputala onyonyo ohuru nke Murder na Orient Express, otu n’ime akwukwo ndi ama ama nke Agatha Christie. Anyị na-enyocha ụfọdụ ndị ọzọ.
Nchịkọta dị mkpirikpi nke akwụkwọ «Luces de Bohemia» nke Valle-Inclán
N'isiokwu taa anyị na-ewetara nchịkọta dị nkenke nke akwụkwọ "Luces de Bohemia" nke Valle-Inclán. A kpochapụwo nke Spanish akwụkwọ.
N'ụbọchị a ka a mụrụ onye edemede nke «Womenmụ nwanyị Nwanyị»
N'ụbọchị a ka a mụrụ onye edemede nke "Womenmụ Nwaanyị": Louisa May Alcott. Taa, anyị tụlere ọrụ ya na nkenke ya "Little Women".
Lope de Vega. Afọ 455 mgbe a mụsịrị ya. Nkebi ahịrịokwu 20 na amaokwu ụfọdụ
Don Félix Lope de Vega agbabeghị afọ 455 ma anyị mee ya bụ ncheta 20 nkebi ahịrịokwu kachasị mma yana amaokwu ama ama ama ama.
Ka ọ dị Peter Berling. Odee nke _Umu grail_ nwuru
Peter Berling, aha bụ isi na akwụkwọ akụkọ ihe mere eme, nwụrụ na nke 20. Anyị na-enyocha ọnụ ọgụgụ nke onye edemede nke _ Smụ nke Grail_.
Enwere ọgụgụ ụda ọchịchịrị 5 ọzọ iji mee ihe nke Black Friday a. Abụọ chịkọtara site Lemaitre na Silva na 3 ọhụrụ weputara site Connelly, Manook na Mytting.
Anọgidere m na-enyocha ndị edemede na ndị edemede si n'obodo m, La Solana, n'ime obi Castilla La Mancha. Taa, ọtụtụ ndị na-ede uri na ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme tinyere ndị na-ede egwuregwu.
Anyị na-ewetara "mpụ nke ọdọ", nke Gemma Herrero dere. Onye ikpe azu nke onyinye edemede akwukwo nke Amazon.’Egwu dị n’ụdị ya dị ọcha.
"Fugas", akwukwo ohuru nke onye egwu egwu James Rhodes, nke ndi Blackie biputara ma nwee onu ahia nke 19,90 euro. Site na November 18 ugbua na ere.
Maka Black Friday a (nke webatara Black Friday) anyị na-ahụ nhọta nke akwụkwọ akụkọ mpụ ụkwụ ojii na akwụkwọ ọhụụ ewepụtara n'ọnwa a.
Anyị na-enyocha ndụ na ọrụ nke Charles Perrault, onye edemede nke ụfọdụ akụkọ ụmụaka a ma ama na akụkọ ihe mere eme.
Taa anyị gbara Isabel Coixet ajụjụ ọnụ a maka ihe nkiri ọhụụ ya bụ "The Library" dabere na akwụkwọ nke Penelope Fitzgerald dere. Ezigbo ọ joyụ
La Solana, obodo dị na Ciudad Real, bụ obodo m. Nyochaa ụfọdụ aha kachasị na edemede akwụkwọ mpaghara.
N'ụbọchị a ka a mụrụ onye edemede bụ Noa Gordon
N'isiokwu nke taa anyị na-asọpụrụ Noa Gordon: Taata ka amụrụ onye edemede bụ Noa Gordon, mana na 1926.
Taa, November 10, Libraries Day na-eme emume. Ebumnuche nke ndị na-ere akwụkwọ na Spain niile iji kwalite ịzụta akwụkwọ.
Akwụkwọ ịhụnanya 10 kachasị mma n'akụkọ ihe mere eme na-akpali ike kachasị ike n'ụwa n'ụdị akụkọ ndị ghọrọzi ndị edemede oge ochie.
Jo Nesbo, onye edeputara ederede na Norwegian nke mpụ na akwụkwọ akụkọ ụmụaka, nyere na nyocha a 10 ndụmọdụ maka ndị edemede mmalite.
Ntụle dị mkpirikpi banyere boigraphy nke Octavio Paz, onye Mexico na-ede uri nke enyere onyinye Nobel maka Literature
Edere akwụkwọ na ọnwụ John Fitzgerald Kennedy, JFK. Anyị na-ahụ ụfọdụ akwụkwọ nwere akara ngosi ya dị ka protagonist ma ọ bụ na ndabere.
Onwa November bu ufodu akwukwo akwukwo n’ide akwukwo di iche iche. Anyị na-enyocha ole na ole.
Ọnwa nke ọnwa Nọvemba malitere ma akụkọ edemede na-atọ ụtọ na-apụta. Ndị a bụ ole na ole. N'ihi na ndị na-agụ niile Genres na masịrị.
O ruo otu narị afọ na iri kemgbe amụrụ Miguel Hernández, otu n’ime ndị na-ede uri kacha mkpa n’asụsụ Spanish. Ya mere, anyị na-eme ememe.
Taa, anyị na-eweta ntakịrị “Otu narị afọ nke ịnọrọ onwe ya” nke GG Márquez so na otu akwụkwọ ọgụgụ kachasị agụ. Ọ bụ onye edemede ndị America na-agụ na Spanish na-agụkarị.
Enweghị ugu, enweghị ududo, enweghị ụsụ, enweghị emume si na mba dị iche iche. Ugbu a, enweghị àgwà ma ọ bụ ka mma karịa Don Juan Tenorio.
Akwụkwọ iri kacha mma iji gụọ na Halloween ma tụọ ụjọ
Akwụkwọ 10 kachasị mma iji gụọ na Halloween site na ọrụ Stephen King kachasị ịtụ egwu na akwụkwọ akụkọ ihe nkiri Jack the Ripper.
Neruda anwụghị maka ọrịa kansa
Abọchị ole na ole anyị maara na Nerudo anwụghị n'ọrịa kansa dị ka akụkọ ọnwụ nke ya gosiri. N'ime ọnwa ole na ole a ga-amata nsonaazụ ya.
N’isiokwu nke taa anyị nyere gị nchịkọta dị nkenke banyere egwuregwu “La casa de Bernarda Alba” nke Federico García Lorca dere, ihe nkiri ejije.
Leo Demidov na Alexei Korolev bụ ndị nchọpụta Russia nke ndị edemede Britain bụ Tom Rob Smith na William Ryan kere. Anyị na-ahụ ndị ha bụ.
N’isiokwu anyị taa, anyị n’enye gị akwụkwọ atọ ị ga-agụ mgbe owu na-ama gị. Owu ọmụma ekwesịghị ịbụ ihe efu site n’akwụkwọ ozi ọma.
Jim Thompson na Joseph Wambaugh bụ aha ochie abụọ na akwụkwọ kacha ojii nke America. Anyị na-enyocha abụọ nke ya masterpieces.
Anyị na-aga n'ihu ịbanye n'ime Nrite 2017 Planeta ọhụrụ na n'isiokwu a anyị na-eweta akwụkwọ 3 ya kacha mma. Yoù gụwo nke ọ bụla n’ime ha?
Taa, Ọktoba 16, a na-eme emume Day Writers na Actualidad Literatura anyị na-akwado akwụkwọ ndị ha dere.
Nye LXVI nke onyinye Planeta. Ma onye mmeri bụ vier Javier Sierra
Na ngwụcha izu a emere mmemme iri isii na isii nke Planeta Awards na Barcelona. Anyị na-agwa gị ihe niile na post a.